RASMI: Kooxda Bayern Munich oo difaac kala soo saxiixatay naadiga PSG.… + SAWIRRO - Hargeele - Wararka Somali State
(Munich) 01 Luuliyo 2020. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa goordhow xaqiijisay inay difaac da’yar kala soo wareegtay naadiga PSG ee ka dhisan Faransiiska.
Bayern Munich ayaa la saxiixatay 18-sano jirkaan daafaca ee Tanguy Nianzou Kouassi, kaasoo ay heshiis ku eg illaa bisha June sanadka 2024-ka ay kala soo wareegeen PSG.
Xiddigan ku dhashay Magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska isla markaana ka ciyaara booska dhaafaca dhexe ayaa naadiga Bayern Munich qalinka ugu duugay heshiis afar sanadood ah.
Heshiiskan cusub ee uu Tanguy Nianzou Kouassi u saxiixay Kooxda Bayern Munich ayaa garoonka Allianz Arena ku sii hayn doona illaa iyo bisha June ee sanadka 2024-ka.
Kouassi ayaa 13 kulan u ciyaaray kooxda waa weyn ee PSG, waxaana uu u dhaliyey saddex gool, isagoo u caawiyey hal gool oo kale.
AU Special Representative sends a message of goodwill to Somalia on its 60th Independence anniversary celebrations
Madaxweynaha Shiinaha oo Soomaaliya ugu hambalyeeyey xuska 60 guurada xornimadeeda
Xiddiga Kooxda Real Madrid ee Eden Hazard oo wali miisaankiisu yahay mid culus & Los Blancos oo doonaysa inuu 4kg iska rido
Vincent Kompany oo shaaca ka qaaday xiddig uu u arko inuu u qalmo ku guuleysiga Ballon d’Or